မြင့်မြတ်သည့်ထိုင်းတော်ဝင်အဆောင် အယောင်ဘွဲ့တော်များသည် တော်ဝင်ဘွဲ့ထူးအဆင့်ဆင့်အဖြစ် တြိုင်လိုကနက်ဘုရင်လက်ထက် (၁၄၄၈-၁၄၈၈ စိုးစံသူ)တွင် စတင်အသုံးပြုခဲ့သည် ။ စနစ်ကိုထိုင်းဘာသာစကားအားဖြင့်ထိုင်းနိုင်ငံ၏ ပဒေသရာဇ် ၊ စကဒီနာ နှင့်ညီမျှသည်။ဧကရာဇ်နှင့် မြင့်မြတ်သည့်သားတော်များစွာရှိခဲ့သည့်အတွက်တော်ဝင်အစဉ်အလာများသည် အနောက်တိုင်းအယူအဆနှင့်ဆင်တူသည်။ ဂုဏ်ထူးအဆင့်အတန်း တစ်ခုသည်အစ (သို့) အဆုံး၌သတ်မှတ်ထားမည်မဟုတ်သော်လည်း နာမည်ပေါ်တွင် မူတည်၍ ကွဲပြားနိုင်သည်။တော်ဝင်ဘွဲ့ထူးတပ်သူများကိုပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာအမည်များဖြင့်ခေါ်ဝေါ်ခြင်းကိုရပ်တန့်ခဲ့ပြီးချီးမြှင့်သော (သို့မဟုတ်အလားတူ) ခေါင်းစဉ်ဖြင့်ရည်ညွှန်းသည်။  ဘုရင်သည် ဘွဲ့ထူးများကို သာမန်မည်သူ့ကိုမျှမချီးမြှင့်ပေးနိုင်သော်လည်း၊ အခြားရာထူးတိုးခြင်းများကို သားတော်သမီးတော်များအတွက်ပုံမှန်အားဖြင့်ကျင်းပပြီး အခြားသူများအတွက် အကျိုးမဖြစ်ခဲ့ပါ။ အဆိုပါဘွဲ့ထူးများ၏ရာထူးအဆင့်ဆင့်အရ ရှုပ်ထွေးပြီးမသိမသာကွဲပြားသည့် ဂုဏ်ထူးရရှိသူတို့အတွက်နေရာရရှိမှုသည် gloss အနောက်တိုင်းဘွဲ့ထူးအသုံးအနှုန်းများနှင့် ဆင်တူသည်။ အမျိုးသမီးများအတွက်ဘွဲ့ထူးချီးမြှင်ခြင်းသည်အနည်းအကျဉ်းသာဖြစ်၍ မြင့်မြတ်သောဘွဲ့ထူးများပေးအပ်ခြင်း သည် ၁၉၃၂ ခုနှစ်တွင်ထိုင်းနိုင်ငံ၏ သယာမ်တော်လှန်ရေး အပြီးတွင်အဆုံးသတ်သွားသည်။ စနစ်တစ်မျိုးတည်းသာလက်ခံကျင့်သုံးခြင်းသည် တော်ဝင်မိသားစုများနှင့်ထိုကဲ့သို့သောဘွဲ့ထူးများကိုရရှိနိုင်ရန်အခွင့်အလမ်းများစွာရရှိစေသည်။ ရလဒ်အနေဖြင့်တော်ဝင်ဘွဲ့ထူးဟောင်းများသည် ထိုင်းလူမျိုး အများစုအတွက်ပင်မထင်ရှားတော့ပါ။
သရဖူမဆောင်းသည့်နန်းတက်ဘုရင်များ - ဆောမ်ဒေ့က်ျဗြ‌ကျောဝ်အယုဟအွာ ( ထိုင်း: สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ), သာမန်အားဖြင့်ဘုရင့်နာမတော်ရှေ့တွင်, သရဖူ မဆောင်းရသေးသည့် ဘုရင်တစ်ပါးအတွက်သုံးနှုန်းသည်။ သရဖူဆောင်းသည့်အခါဘုရင်သည် ဗြးပါဒ််ဆောမ်ဒေ့က်ျဗြးကျောဝ်ယူဟအွာဘွဲ့ကိုရယူခဲ့သည်။ ဥပမာ ( ထိုင်း: ဆောမ္ဒေ့က်ျဗြးကျောဝ်အယူဟအွာမဟာဝချိရာလောင်ကောရ်ဏ် ပေါဒိန္ဒြာဒေဗျဝရာင်ကူရ် รณบดินทรเทพยวรางกูร ; ဘုရင်မင်းမြတ် Maha Vajiralongkorn Bodindradebayavarangkun) ။ 
ထုံးတမ်းစဉ်လာအရတော်ဝင်ဇနီးသည်များသည်သူတို့၏မွေးဖွားမှုနှင့်တော်ဝင်မှုအပေါ်မူတည်သည်။ မြင့်မွေးဖွားသောမင်းသမီးများသာ (ကျောဝ်ဖာဗြးအောင်ၐ် နှင့် မောမ်ကျောဝ်ယိင်) တို့သည် ကျောဝ်ကျောမ် ထက်ပိုမိုမြင့်မားသောဘွဲ့များယူမှတ်သည်။[ကိုးကားချက်လိုသည်] ကျောဝ်ကျောမ် အထက်တွင် ဘုရင်အဆင့်ဆင့်နှင့်ပတ်သက်သောရှင်းလင်းသောစည်းမျဉ်းများမရှိခဲ့ပါ။ ဘုရင်မောင်းကွတ်မတိုင်မီအထိနှင့်ဘွဲ့များသည်အဆက်ဆက်စိုးစံသောကာလများအတွင်းပြောင်းလဲသွားခဲ့သည်။ သာမန်လူများနှင့်ပတ်သက်သောစည်းမျဉ်းများသည်လည်းပြောင်းလဲနေပုံရသည်။ သာမာန်အားဖြင့်မိဖုရားဖြစ်လာခြင်းကိုတားမြစ်ခြင်းမရှိတော့သည်။ အောက်ဖော်ပြပါခေါင်းစဉ်အများစုမှာဘုရင် ဗာဂျရရူဗဒ် ၏ ၁၉၂၄ ခုနှစ်တွင်ဆက်ခံခြင်းဥပဒေပြဋ္ဌာန်းခြင်းမှဖြစ်သည်။
နန်််းမတော်မိဘုရားကြီး "နာထ်"ဆိုသည်မှာ အမိုးအကာဖြစ်ပြီး ခင်ပွန်းသည်််အပေါ်တွင် တိုင်တိုင်
တည်ငြိမ်အေးချမ်းသည့်မင်းသား (မင်းသမီး) အခွင့်ထူးခံသားတော်များ၏ သားတော်များအတွက် ပေးသနားတော်မူမည့်ဘွဲ့ဖြစ်ပါသည်။
မြင့်မြတ်သည့်တည်ငြိမ်အေးချမ်းသည့်မင်းသား (မင်းသမီး) ဘုရင့်မင်းမြတ်၏အခွင့်ထူးခံမြေးတော်များအတွက် ဗြးကျောဝ်လန်ထောရ်ဗြးအောင်ၐ်ကျောဝ် ( မြင့်မြတ်သည့်တော်ဝင်ဘွဲ့ရ မင်းသား) တော််််ဝင်အစဉ်ရှိဘွဲဲ့တော််် ကိုပေးသနားတော်မူလေ့ရှိသည်။
မောမ်ရာချဝေါင်ၐ် ဘုရင်မင်းမြတ်၏အခွင့်ထူးခံမြေးတော်များအတွက် ဗြးလန်ထောရ်ဗြးအောင်ၐ်ကျောဝ်(မြင့်မြတ်သည့် မင်းသား) နှင့် မောမ်ကျောဝ် (မြင့်မြတ်သည့်သာမန်မင်းသား)အစဉ်တော်််ဘုရားဘွဲ့တို့ကိုပေးသနားတော်မူလေ့ရှိိ။ ထိုသူတို့သည်တော်ဝင်မိသားစုဝင်များမဟုတ်ပါ။
မောမ်ရာချဝေါင်ၐ် (หม่อมราชวงศ์, RTGS: Mom Ratchawong ; ထိုင်းဘာသာဖြင့် ม.ร.ว. နှင့် မ.ရအဖြစ်မြန်မာ ဘာသာနှင့် ဘာသာပြန်ထားသော အဆိုပါဂုဏ်ထူးဆောင်အစဉ်တော်ဘုရားဘွဲ့ပထမအမည်ပြီးနောက်အမျိုးသား၌ ကျောဝ် မ.ရ (မြန််မာ) ကို ထပ်မံံံံံံဖြည့်သွင်းဖြည့်သွင်းသည်ဟုအများအားဖြင့်ယူဆနိုင်ပါသည်။)" ဦးခုဏ်ချိုင် (အထီး) သို့မဟုတ် ခုဏ်ယိင် ကဒုတိယ (အမျိုးသမီး) คุณชาย.../คุณหญิง... คุณชาย.../คุณหญิง... คุณชาย.../คุณหญิง... คุณชาย.../คุณหญิง... คุณชาย.../คุณหญิง... คุณชาย.../คุณหญิง... ) ။ ဤအစဉ်တော်ဘုရား ကိုကိုင်ဆောင်ထားသူများကိုရံဖန်ရံခါ အင်္ဂလိပ်စာဟောင်းများတွင်မှားယွင်းဖော်ပြပြီး၊ မင်းသားများသို့မဟုတ်မင်းသမီးများအဖြစ်ရည်ညွှန်းကြသည်။ ယခုအချိန်တွင်မှန်ကန်သည့် "မောမ် ရာချဝေါင်ၐ် " ဟူသည့်အစဉ်တော်ဘုရားဘွဲ့အမည် ကိုအသုံးပြုမှု ပို၍ အသုံးများလာသည်။
မောမ်လုအန် (หม่อมหลวง (ထိုင်းဘာသာ) နှင့်တခါတရံအင်္ဂလိပ်လို အမ််လန် နှင့်“ ဂုဏ်််ထူးဆောင်ဘုရားပုံစံ”) ဟုဘာသာပြန်ထားသော) သည်ဘုရင့်ဘွဲ့ကိုဆက်ထိန်းထားသည့်နောက်ဆုံးမင်းဆက်ဖြစ်သည်။ မောမ်လုအန်ဘွဲ့ကို မောမ်ရာချဝေါင််ၐ်၊ ယောက်ျားလေးများမှရရှိသည်။ အပြန်အလှန်စကားပြော (မမှန်ကန်ပါက) သူတို့ကိုတစ်ခါတစ်ရံ "မေ" ဟုခေါ်သည်; မှန်ကန်သောအလွတ်သဘောလိပ်စာ "ဟုဦးခုဏ်" คุณ ) .
ဗြးချာယာ ( พระชายา ) မင်းသမီးအတွက် ဖြစ်ပြီး ကျောဝ်ဖှာ (မြင့်.တော်.ရ မင်းသမီး) သို့မဟုတ် အောင်ၐ်ကျောဝ် (မြင့်.တော်.ရ မင်းသမီီး )* ဘွဲ့အစဉ်တော််််ရဘုရားဘွဲ့ သည်မင်းသားနှင့်လက်ထပ်ထိမ်းမြားထားသူအတွက် ဖြစ်သည်။ သူမသည်သူမ၏ကိုယ်ပိုင်အစဉ်တော်ဘုရားဘွဲ့ကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားနိုင်သည်။ ဇနီးအဖြစ်သတ်မှတ်ပြီးသည့်အခါ အခါသူမ၏ အမျိုးသားကိုသည် ဗြးချာယာနိုင် (ခင်ပွန်း၏အမည်) ဟုခေါ်ဆိုနိုင်ပါသည်။ [မြင့်မြတ်သည့် တော်ဝင်ဘွဲ့ရ] *
ချာယာ (ชายา) သည်မင်းသမီးနှင့် မောမ်ကျောဝ် (မြင့်.သာ.ရ မင်းသမီး )* ဖြစ်ပြီးအဆင့်တိုင်းတွင်မင်းသားနှင့်လက်ထပ်သူ။ နောက်တဖန်သူမ၏ကိုယ်ပိုင်အစဉ်တော်ဘုရားဘွဲ့ ကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းရန်လိုလိမ့်မည်။ သူမကိုမင်းသား၏ဇနီးအဖြစ်ရည်ညွှန်းသောအခါသူမ၏ အမျိုးသားအမည်ကို "ချာယာနိုင်" ဟု ခေါ်ဆိုနိုင်ပါသည်။ [ မြင့်မြတ််််သည့်သာမန်ဘွဲ့ရ]*
ကျောဝ်ဖှာ ၊ ထိုင်းနိုင်ငံ၏ မြင့်.တော်.ရ မင်းသမီး ဆောမ္ဒေ့က်ျယိင်(တော်၀ င်မင်းသမီး၏သမီး)
, ထိုင်းနိုင်ငံ၏ မြင့်.တော်ရ မင်းသမီ၊ ဆ္ဒေ့က်ျ‌ဗြးအောင်ၐ်ယိင် (မိဘုရားငယ်၏ အခွင့်ထူးခံသမီးတော် )
ဗြးအောင်ၐ်ယိင် , ထိုင်းနိုင်ငံ၏ မြင့်.တော်.ရ မင်းသမီး ဗြးအောင်ၐ်ယိင် (ဘုရင်မနှင့်ဘုရင်မနှင့်အတူအချုပ်အခြာအာဏာ၏သား၏သမီး)
ဗြးအောင်ၐ်ကျောဝ် , ထိုင်းနိုင်ငံ၏ မြင့်မြတ်သည့် မင်းသမီး: ဒန်ဗြးအောင်ၐ်ယိင် (အခွင့်ထူးခံ ၏သားသမီး၊ မောမ်ကျောဝ်မှ ဗြးအောင်ၐ်ကျောဝ် သို့မြင့်တက်ခဲ့သည်)
မောမ်ကျောဝ်, ထိုင်းနိုင်ငံ၏ မြင့်.သာ.ရ မင်းသမီး - ဒန်ယိင် (အခွင့်ထူးခံသားနှင့်သူ၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်၊ သို့မဟုတ်အချုပ်အခြာအာဏာ၏မြေးမလေး)
ဤဘွဲ့အမည်များကိုအမျိုးသားများသာပေးပြီးအမွေဆက်ခံခြင်းမဟုတ်သည့် သက်တူရွယ် တူများနှင့်ဆင်တူသည်။ ဥရောပနှင့်ညီမျှသောသံတမန်ရေးရာမစ်ရှင်များတွင်လည်းအသုံးပြုခဲ့သည်။ အားလုံးခေတ်ကုန်သွားပြီဖြစ်သော်လည်း Phan နှင့် Nai တို့သည်ခေတ်သစ်အဓိပ္ပါယ်များရှိသည်။ အရပ်ဘက်နှင့်စစ်ဖက်ဆိုင်ရာလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များသည်အောက်ပါအစဉ်အလာအတိုင်းရှိသည် -
ခုဏ် ( คุณ ), အလယ်တန်း သေံ နှင့်အတူအသံထွက် ယဉ်ကျေးခေါင်းစဉ်, အလားတူ - စာလုံးပေါင်း သစ်ပင် သို့မဟုတ်ခွန်၏ပဒေသရာဇ်ခေါင်းစဉ်နှင့်အတူရောထွေးမရသင့်ပါတယ် ( ခုန် , တစ် ဦး မြင့်တက်သေံအတွက်အသံထွက်။ ယဉ်ကျေးသိမ်မွေ့သောခေါင်းစဉ်ကိုရာထူးနိမ့်သူတစ် ဦး နှင့်လက်ထပ်ထိမ်းမြားရန်မြင့်မြတ်သောမိခင်မှမွေးဖွားသောကလေးများအတွက်အသုံးပြုသည်။ ထင်ရှားသောဥပမာတစ်ခုမှာကွယ်လွန်သူ ခုန်ဖောမ်ဂျေဆန် ဖြစ်သည်။ ဒီနေ့ဒီစကားလုံးကိုအမေရာဂျော်ဂျဲ (သို့) အထက်အဆင့်ရှိသူများ မှလွဲ၍ မည်သူမဆိုကိုယဉ်ကျေးစွာဖြေရှင်းရန်အလွတ်သဘောအသုံးပြုသည်။ ၎င်းသည် ထိုအီ နှင့်မတူသည့်အသုံး ဖြစ်ပါသည် ( เธอ ) ။
↑ Roberts, Edmund [First published in 1837] (12 October 2007). "Chapter XIX―titles of the king", Embassy to the Eastern courts of Cochin-China, Siam, and Muscat: in the U. S. sloop-of-war Peacock ... during the years 1832-3-4. Harper & brothers, 301–303။ 25 April 2012 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ထိုင်း_တော်ဝင်အဆောင်ယောင်_ဘွဲ့တော်များ&oldid=518084" မှ ရယူရန်